तपाईं कोविड - १ During को बखत तपाईंको रोजगारीमा असक्षम हुनुहुन्न - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B19B बजार समाचार
सम्पादकको पिक नोभेम्बर 12, 2020 डिसेम्बर 3, 2020 रोबर्ट मोमेन्ट अफगानिस्तान फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, अफ्रीका फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, अरबी फ्रीलान्स, अर्जेन्टिना फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, बंगलादेश फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, बेल्जियम फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, बेलायत फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, बुल्गारिया फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, व्यापार, Gigs किन्नुहोस् र बेच्नुहोस्, Gigs किन्नुहोस्, क्यानडा फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, चीन फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, चीनियाँ स्वतन्त्रता, क्रोएशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, डेनमार्क फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, DR कांगो स्वतन्त्र ग्लोबल Gigs, सम्पादकको पिक, इजिप्ट फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एस्टोनिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, FGG कम लागत बजार, फ्रान्स फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, जर्मनी फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, gigs, बिक्रीको लागि Gigs, ग्रीस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, ह Hongक Kong फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, हंगेरी फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, इन्डोनेसिया फ्रिल्यान्स ग्लोबल गिग, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, इटाली फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, जापान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, केन्या फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, लिबिया फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, मेक्सिको फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, नेपाल फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, नाइजेरिया फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, पाकिस्तान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, फिलिपिन्स फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, Gigs पोष्ट गर्नुहोस्, रूस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, गिगहरू बेच्नुहोस्, तपाईंको Gigs विश्वव्यापी रूपमा बेच्नुहोस्, साइड Gigs, दक्षिण अफ्रीका फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, दक्षिण अमेरिकी फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, दक्षिण कोरिया फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, स्पेन फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, श्रीलंका फ्रीलानिंग ग्लोबल गिग्स, थाईल्याण्ड फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, टर्की फ्रीलान्स ग्लोबल गिग्स, युक्रेन फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, विश्व फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग
तपाईंको उद्योगमा तीसँग नेटवर्क।
तपाईंलाई समात्नको लागि अस्थायी अवसरहरू विचार गर्नुहोस्, जस्तै सम्झौता र टाढाको काम।
तपाईंको उद्योग भित्र तपाईंको कौशल वा विकास उन्नतित गर्नुहोस्।
तपाईंको काम खोजको बखत नियन्त्रण फिर्ता लिन तपाईंले गर्न सक्ने अन्य केहि चीजहरू हेरौं। COVID-19 ले हामीलाई केही चाखलाग्दो परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्‍यो, तर जीवन जारी रहन्छ, र यसको मतलब तपाईंले महामारी हामीमाथि छ कि छैन भन्ने कुरा देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीको ख्याल राख्नु पर्छ। सहि सकारात्मक मनोवृत्ति र मानसिकताका साथ तपाईले अवसर लिने अवसर पाउनुहुनेछ जब यसले आफैं प्रस्तुत गर्दछ।
१V थप सल्लाहहरू COVID-१ Pand महामारीको समयमा तपाईंको कामको खोजको नियन्त्रण कब्जा गर्न
के तपाईं थप सल्लाहहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ? केवल तिनीहरूलाई नपठाउनुहोस्। कसरी तपाईं कार्यवाही गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको काम खोजीमा फरक पार्ने बारेमा सोच्नुहोस्। यसले फरक पार्छ भन्ने सोच्दै अर्को लेख स्किम गर्न सजिलो छ, तर कुनै कार्य बिना, यो केवल जानकारी हो।
कसले सक्रिय रूपमा भाडामा छ? के एक कम्पनीले भर्खरै धेरै कामदारहरूलाई छुट दियो? तिनीहरू सायद लागू गर्नको लागि होइनन्। अझै सक्रियतासाथ अगाडि बढिरहेका ती व्यवसायहरू खोज्नुहोस्। सबै जना महामारीको बेला बन्द भएनन्, यदि उनीहरूले यो महसुस गरे पनि।
तपाईंको उद्योगमा तीसँग नेटवर्क। तपाई काम खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने शब्द राख्नुहोस्। लिंक्डइनमा उद्योग सम्बन्धी समूहहरूमा सामेल हुनुहोस् वा उनीहरूसँग भएका संसाधनहरू हेर्नको लागि पेशेवर संगठनहरूसँग जाँच गर्नुहोस्।
अस्थायी अवसरहरू विचार गर्नुहोस् तपाईंलाई होल्ड गर्न, जस्तै सम्झौता र टाढाको काम।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग छ भर्चुअल अन्तर्वार्ताको लागि शान्त, संगठित ठाउँजूम सम्मेलनमा सफ्टवेयरमा लिनेहरू। आफूलाई उत्तम प्रकाशमा प्रस्तुत गर्नुहोस्।
त्यहाँ एक मार्ग छ आफ्नो कौशल वा विकास उन्नत गर्नुहोस् तपाईको उद्योग भित्र? आफ्नो क्षमता सुधार गर्न समय लिनुहोस्। यो न केवल तपाईको आत्मविश्वास बढाउने एक उत्तम तरिका हो, तर तपाईले कम्पनीमा लागू गरिरहनु भएको थप मूल्य प्रस्ताव गर्दछ।
तनाव वा चिन्ताको समाधान गर्नुहोस् अन्तर्वार्ता लिनु अघि। आत्मविश्वासको आवाज सुन्नु महत्त्वपूर्ण छ, हताश होइन। उपायहरू सोच्नुहोस् जुन तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ, यो रनको रूपमा हिँड्ने जत्तिकै सरल चीज हो, लामो सास फेर्दै, कुनै प्रकारको तयारी कार्य गर्दै, वा सकारात्मक नतीजाहरूमा केन्द्रित।
कार्य खोज साइटहरूमा गुगल सचेत र सचेतहरू सेट गर्नुहोस् तपाईंको उद्योगमा कुञ्जी शब्दहरूको लागि। यस तरीकाले तपाईले नयाँ अवसरहरूको बारेमा चाँडै सुन्नुहुनेछ। प्रत्येक काम साइटसँग यो सहयोगी संसाधन हुँदैन तर ठूला साइटहरू जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्। साथै, गुगल सचेतहरूको साथ यो समाचार र कुरा गर्ने पोइन्टहरूको लागि तपाईंको उद्योगमा रहनको उत्तम तरिका हो।
के त्यहाँ पदहरू छन् जुन तपाईंले रोजगारको लागि सोच्नुभएको छैन जुन वास्तवमा तपाईंको सीपको लागि एक फिट हुन सक्छ? के तपाइँ नयाँ अवसरहरूको लागि खुला हुनुहुन्छ जुन तपाईंले विचार गर्नुभएन?
रोजगार भर्तीकर्ताहरूसँग बोल्नुहोस्। उनीहरूलाई अवसरहरू थाहा हुन्छ जुन तपाईंले गर्नुहुन्न। खुला ढोकाहरू जुन तपाईं विगतमा सोच्नुहुन्न। त्यहाँ उपेक्षित अव्हेन्यूहरू छन् जुन तपाईंलाई जानकारी खोज्नको लागि अनुमति दिन्छ जुन तपाईंसँग पहुँच गर्न सक्दैन। प्राय जसो कम्पनीहरूले बोर्डहरूमा उनीहरूको काम पोष्ट गर्दैनन्, र भर्तीकर्ताहरूले निश्चित व्यवसायको साथ भित्र राख्न सक्छन्, म्यानेजरहरू भाडामा लिन सक्छन्, र जान्छन् कि टाइमलाइन भाँडामा लिने कुरा छ।
बलियो बानी सिर्जना गर्नुहोस् काम खोज्ने र यसको लागि नियमित आधारमा निवेदन दिन, त्यसैले यो कुनै अनियमित बान्की छैन। ठाउँमा राम्रो प्रणाली तपाईंको काम खोजीको बखत तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ। राम्रो बानीहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुहोस् कि यो उद्योगको ज्ञानमा ब्रश गर्दै छ, स्वस्थ बन्नेमा काम गर्दैमा तपाईं आफैंलाई राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ, वा तपाईंले हालसालै नगर्नुभएको कुनै चीजमा तपाईंको सीपहरू स्फूर्ति प्रदान गर्दै।
याद गर्नुहोस् तपाईंको सामाजिक मिडिया दृश्यात्मक छ। यसबाट विवादास्पद, विचारयुक्त सामग्री राख्नुहोस्। तपाईको सम्भावित भविष्य नियोक्ताले तपाईलाई को लागी राम्रो अनुभव पाउन सक्छन। हो, यो तपाईको व्यक्तिगत ठाउँ हो, तर तपाई गलत हुनुहुनेछ यदि तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि यो जाँच हुँदैन। रोजगारदाता तपाईलाई मात्र काम गर्न सक्दछ कि भनेर जान्न चाहान्छन्, तर तपाई कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ र यदि तपाईको मानहरू उनीहरुसँग संरेखित छन्।
दुबै ठाडो र तेर्सो सोच्नुहोस्। के त्यहाँ पदहरू छन् जुन तपाईंले रोजगारको लागि सोच्नुभएको छैन जुन वास्तवमा तपाईंको सीपको लागि एक फिट हुन सक्छ? के तपाइँ नयाँ अवसरहरूको लागि खुला हुनुहुन्छ जुन तपाईंले विचार गर्नुभएन?
आफ्नै लागि लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्। केहि गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई प्रेरित र उत्प्रेरित राख्दछ र यसलाई इनाम बनाउँदछ तपाईंको कामको खोजीमा खर्च गरेको समयको लागि। यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ जब तपाईं ड्राइभको अभावमा अगाडी बढ्नको लागि अभावित अवस्था जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं स्थिति नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं आफ्नो कार्यहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई के गर्नुहुन्छ तपाईमै भर पर्छ। हामी संसारमा परिवर्तन र अनियमित महामारी जस्ता अनौठो परिस्थितिहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं जसले हाम्रो सबै जीवनलाई बाधक बनायो, तर हामी कसरी चीजहरू हेर्छौं र हामी कसरी प्रतिक्रिया गर्छौं भन्ने कुरा परिवर्तन गर्न सक्छौं। दृष्टिकोण दिमागमा राख्नुहोस् र आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्नुहोस्।
सबैभन्दा ठूलो चीजहरू जुन तपाईं मा काम गर्न चाहनुहुन्छ एक अन्त लक्ष्यमा केन्द्रित रहनु हो। निराश हुन यो सजिलो छ। तपाईले सोचे जस्तो जीवन अघि बढिरहेको छैन। तर, यो ठीक छ। कहिलेकाँही, हामीले सामना गर्ने चुनौतिहरूले हामीलाई बलियो बनाउँछ, र हामीलाई बाकस बाहिर सोच्न बाध्य पार्छ। यो भेषमा एक आशिष्‌ हुन समाप्त हुन सक्छ। के तपाईं आफूले चाहेको सही काम पाउनुभयो भने के हुन्छ?
आशा र आशाको साथ डराउनु भन्दा तपाईको रोजगार खोजीमा जानुहोस्, र तपाईको सम्पूर्ण मानसिकता तपाई संग बदल्नेछ। तपाईं प्रोजेक्ट हुनुहुन्छ कि तपाईं को हो र अरूलाई कस्तो लाग्दै हुनुहुन्छ शरीरको भाषा जस्ता सरल चीजहरूको माध्यमबाट तपाईंले महसुस गर्नुभएन। तपाइँ समक्ष चुनौतीलाई अँगाल्नुहोस् र जान्नुहोस् कि तपाइँ अन्तत: अवरोध पार गर्नुहुनेछ र सही काममा प्रवेश गर्नुहुनेछ।
सांप्रदायिक समाचार कोभिड 19 जागीरको खोजि काम खोज चिन्ता काम खोज डिप्रेशन नौकरी खोजकर्ता काम सल्लाह रोजगार प्रशिक्षण मानसिक स्वास्थ्य लेखन पुनः सुरु गर्नुहोस् बेरोजगारी
इन्डोनेसियाले यसको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि ग्लोबल वैल्यू चेन आवश्यक छ